Mushure mekutenga yeruzhinji shell kambani, zvinyorwa zvekubatana zvinonyorwa uye kumisikidzwa. Paunenge uchibatanidza yakazvimiririra kambani pamwe neruzhinji kambani, iwe unochengeta zita reiyo iriko bhizinesi. Zvinyorwa zvako zvekubatanidza ndiwo mafomu epamutemo anosanganisa makambani ako maviri, achikusiya uine sangano repamutemo rakagadzirira kutengesa zvikamu zvaro kuruzhinji. Izvo zvirimo pano ndezve ruzivo uye zvekudzidzisa zvinangwa chete. Mamwe emakambani akanyorwa pazasi anogona (kwete) kutengeswa paruzhinji. Iri peji harifanire kutorwa seye kupihwa kutenga kana kutengesa chengetedzo. Shanduko dzinongotorwa dzinoiswa kuburikidza nemagweta ane marezinesi uye ma broker, sezvinodiwa nemutemo, uye kwete zvakananga kuburikidza nekambani yedu. Tsvaga marezinesi epamutemo uye emitero kuraira.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa muna Zvita 2, 2021